Anyị na-agbagha okwu mgbe ọnya oyi na-atụ? | Network Meteorology
Anyị na-agbagha okwu mgbe ọnya oyi na-atụ?
Na Spain anyị enweela oke oyi mmiri sitere na Siberia n'akụkụ niile nke peninshula, belụsọ na Canary Islands. Anyị anọwo na ka ọtụtụ kwurula obodo ka dị na njikere maka obere okpomọkụ, oke mmiri ozuzo na oke ikuku.
Durante ebili mmiri ahụ enwere ọtụtụ ụzọ iji kọwaa ma ọ bụ bufee oyi, mana ndị na-amụ gbasara ihu igwe na-eji ụfọdụ okwu anyị nwere ike ghara ịghọta nke ọma. Kedu okwu ndị a na-eji na ebili mmiri?
1 Kedu ihe ọ pụtara mgbe ọnya oyi rutere elu ya?
2 Mwepu n'okpuru efu
3 Kedu ebe oyi si enweta?
4 A na-ajụkwa oyi
5 Uwe na-ekpo ọkụ na uwe akwa
6 Oyi oyi
7 Dee oyi na ice ma ọ bụ oyi na ice
Kedu ihe ọ pụtara mgbe ọnya oyi rutere elu ya?
Mgbe oyi na-atụ oyi rutere elu ya na iru ebe kachasị oyi, ya bụ, mgbe ndị na-ekpo ọkụ na-aga igosi ọnọdụ okpomọkụ kachasị oyi nke oyi niile. Ọ bụghị naanị na ọ pụtara na ebili oyi na-erute opekempe nke okpomọkụ, mana elu ahụ na-ezokarịkwa oge nke oge ọ dị oke nkpa ma ọ bụ mechie ụfọdụ usoro anụ ahụ, usoro okike, wdg.
Mwepu n'okpuru efu
Ọ na-ejukarị ndị mmadụ anya ma temometa ruo okpomọkụ. Ebe ọ bụ na ọ bụghị hakarị ka ha na-ada ala, okwu ndị dị ka "enwere okpomọkụ n'okpuru efu" bụ usoro nke ụbọchị. Na mgbakwunye na okwu Spanish anyị, anyị na-anụ ya site na mgbasa ozi n'ọtụtụ oge. N'ụzọ dị otú a, anyị na-enwe mgbagwoju anya na nkọwa okwu. Ma ọ bụ na okpomọkụ bụ ma ogo adịghị mma ma ọ bụ n'okpuru efu, mana ọbụghị ha abụọ.
Kedu ebe oyi si enweta?
A na-ekwukarị mgbe ọ bụla ezigbo oyi, ọ bụ polar oyi. Nke ahụ bụ, oyi na-abịakwute anyị site na ifufe si n’osisi dị n’ebe ugwu. Agbanyeghị, ọ bụghị mgbe niile oyi na ebili mmiri na-abịa site na okporo osisi. Mgbe ụfọdụ ha na-esite na Siberia, oge ụfọdụ site na steepụ, wdg. Ma maka Spanish ọ ga-abụ polar oyi.
A na-ajụkwa oyi
Ọ bụ otu n’ime ihe ndị mmadụ na-ahụkarị ma ha banye ọrụ ma ọ bụ n’ụlọ nri. Oge oyi na-atụ m. Ọ bụ okwu na-ezo aka na oyi na-atụ na ọ "juru ya anya." Mmetụta a bụ ihe a na-ahụkarị mgbe okpomọkụ na-ada dị ala.
Uwe na-ekpo ọkụ na uwe akwa
Nakwa na oyi na-atụ ụbọchị nchọta ịntanetị na-abawanye na otu esi esi kpoo ụlọ gị, chekwaa na kpo oku ma jikọta ya nke ọma iji zere ịjụ oyi. Ihe kachasị mkpa bụ ịchọ uwe na-ekpuchi anyị site na oyi iji nwee ahụ iru ala n'okporo ámá na n'ụlọ. Uwe ndị na-eme ka anyị zere oyi bụ uwe na-ekpo ọkụ, ya bụ, sọks, okpu, uwe, uwe, wdg. Mana buru n’uche na ọ bụ akwa ‘’ kwes ’’ abụghị nke ‘’ kwesiri ’’. Uwe na-ekpo ọkụ bụ uwe na-echebe anyị pụọ na oyi, mana okwu ahụ bụ thermal na-ezo aka na ihe niile metụtara mmiri ọkụ. Emegharịla, mana, google uwe ejiji, iji hụ ihe ị nwetara.
Yiri thermal na thermal na polar oyi, anyị na-agbagọkwa okwu "glacial" na "glacier". N'ọtụtụ akụkọ akụkọ, anyị na-ahụ okwu ahụ "oyi na-atụ." Agbanyeghị, glacier na-ezo aka na ihe ọ bụla metụtara glaciers na akpụrụ mmiri ice nke gbakọtara karịa njedebe nke snow na-adịgide. Ebe oyi bụ ihe anyị, 'ezigbo oyi' ma ọ bụ 'nke na-eme ka oyi ma ọ bụ oyi'.
Dee oyi na ice ma ọ bụ oyi na ice
A na-ekwukarị ya n'oge edere oke oyi na akpụrụ. Otú ọ dị, ụzọ ziri ezi iji tinye ya bụ snap oyi na akpụrụ. N'ihi diphthong hie, ọ dịghị mkpa ka anyị tinye e maka njikọta. Enwere ndị na-ekwenye na ihe ahụ adịghị njọ, na nke a abụghị oyi ma ọ bụ glacial ma ọ bụ pola ma ọ bụ ihe ọ bụla, na ọ bụ obere oyi, dị ka obere ihe, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ obere eghe, anyị nwere ike ikwu, ma ọ bụ obere oyi, nke bụ ihe pere mpe n'aha a, nke anyi na-adighi achoghi acho.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ebili mmiri oyi » Anyị na-agbagha okwu mgbe ọnya oyi na-atụ?
Da na ndị ụlọ ọrụ ya wepụrụ ihe niile gbasara mgbanwe ihu igwe na okpomoku zuru ụwa ọnụ site na webụsaịtị gọọmentị nke White House
Okpomoku di n’uwa n’ile nwere ike iwepu ubochi zuru oke